I-Pramiracetam powder emifushane (68497-62-1) Abakhiqizi - Phcoker
I-Pramiracetam ye-powder ephezulu (68497-62-1)
I-Pramiracetam powder iyinhlanganisela yokwenziwa kwe-racetam ngenhloso yokuthuthukiswa kwengqondo ...
Umthamo: I-1018 kg / inyanga
I-Pramiracetam powder emfushane (i-68497-62-1) ividiyo
I-Pramiracetam powder emfushane (68497-62-1) Incazelo
I-Pramiracetam ephrinti ephakeme (eyaziwa nangokuthi i-Pramistar) ingumgqugquzeli wokuqonda (i-nootropic) eyakhiwe kusuka ku-piracetam, i-racetam yangempela, ngokufaka endaweni ye-amide eqenjini le-piracetam ngeqembu le-dipropan-2-ylamino ethyl. Lokhu kufakazela i-Pramiracetam e-Rawrut Raw ukuze ibe namandla ngaphezu kwe-piracetam.
Izindlela zikaRaw Pramiracetam powder aziyazi kahle, kodwa kubonakala sengathi zishintsha umsebenzi we-EEG kuwo wonke ama-rats ahlolwe (abancane nabadala) futhi angakwazi ukuthuthukisa ukuphakama okuphezulu kokubambisana. Kufana ne-piracetam nezinye izinhlanga ngokusho ukuthi izindlela zayo zibonakala zixhomeke emigqonyeni ye-adrenal kanye neminye imiphumela yomzila, kodwa ngaphesheya kwalokho ukuthi izinqubo azange zichazwe kabanzi.
I-Pramiracetam powder emifushane (68497-62-1) Siziqu
Igama Product I-Pramiracetam enamandla kakhulu
Igama leKhemikhali Amacetam, Raw Pramiracetam powderum
Brand NAme Khumbula (i-ParkeDavis)
I-Drug Class I-anti-migraine agent
CAS Inombolo 68497-62-1
I-molecular Fi-ormula C14H27N3O2
I-molecular Weziyisishiyagalombili I-269.38 g / mol
IMisa ye-Monoisotopic 269.38
Ukuxuba Pi-oint I-47-48 ° C
BilisaIng Pi-oint bp0.15 162-164 ° C
I-Half Half-Life Mayelana namahora angu-5
Color Amakhadi amhlophe
Sukufaneleka I-H2O: i-soluble10mg / mL, icacile
Aukuphikisana Ukwandisa inkumbulo nokuthuthukisa ikhono lokufunda
Raw I-Pramiracetam powder (68497-62-1) Incazelo
I-Pramiracetam powder iyisimiso sezinzwa zomphakathi esishukumisayo nesisetshenziswa se-nootropic somndeni wama-racetam wezidakamizwa. I-Pramiracetam ingenye yobuchopho obuqine kakhulu obususa ama-nootropics atholakalayo, yi-5 izikhathi ezingu-30 ezingaphezu kwesilinganiso sayo. It ngcono ukugxila, ukugxila, kanye nenkumbulo. Ngokuphambene nezinye zezinhlanga, i-pramiracetam ihlolwe ngabantu abadala abanempilo kunokuba nje igxile kulabo asebekhulile asebelahlekelwa ngamakhono abo okungaqondakali. Ngokuqondile, i-pramiracetam kusiza ukuthuthukisa inkumbulo yesikhathi eside kulezi zivivinyo.
Le nootropic nayo isebenza njenge-agent ye-neuroprotective futhi ingavimbela ukulahlekelwa kwememori nokunciphisa ukuqonda kokujwayelekile.
I-Pramiracetam powder (68497-62-1) Inqubo yesenzo
Njengama-racetams amaningi, futhi ama-nootropic amaningi kakhulu, i-pramiracetam ithinta ukukhishwa kwamakhemikhali ebuchopho, okuthiwa ama-neurotransmitters, avumela ukudluliselwa kwamasignali phakathi kwamangqamuzana omzimba. Kodwa, i-pramiracetam yenza izinto kancane kancane. Akusikhuthazi ngokuqondile izingosi ezithile ze-receptor ze-neurotransmitter, umphumela wawo ozokwenza kube ngcono ekukhiqizeni nasekukhululweni kwe-neurotransmitter ethile.
I-Pramiracetam iyasiza ngokucabanga okucacile. I-Pramiracetam isebenza ngokukhulisa u-Choline obuseduze kakhulu ku-hippocampus. Njengoba inhlanhla ingaba nayo, i-Choline ibonakala iyisandulela se-neurotransmitter ebizwa nge-Acetylcholine, engumdlali oyinhloko ezindleleni zokucabangela ezifana nokuhlushwa, isivinini sokufunda kanye nenkumbulo. Ngakho-ke, yiliphi i-pramiracetam eyenza ngokungaqondile imithombo ye-receptor ye-Acetylcholine, evuselela umsebenzi okwandisiwe ku-hippocampus. Lo msebenzi owengeziwe uthuthukisa ukwakheka kwezinkumbulo ezintsha kanye nokubhekisela kwabakudala.
Izicelo of I-Pramiracetam powder (68497-62-1)
I-Pramiracetam powder yasungulwa yiParke-Davis emuva kwe-1970s futhi i-brevet e-US ku-1979. Nakuba sekuye kwafundwa ngokujulile njengokwelashwa kwezinkinga zememori ezihlobene nokulimala kwengqondo kanye nezifo ezifana ne-Alzheimer's, ngalesi sikhathi i-FDA ayiwamukeli ngalutho oluthile.
Lokho kusho ukuthi i-pramiracetam ibonile impumelelo eYurophu. Kuthengiswa ngaphansi kwamagama wegama le-Neupramir, Pramistar, ne-Remen, kuvame ukushiwo ukwelashwa kwezimo ze-neurolomenti njengokungabangwa kwe-dementia, i-dyslexia, ne-ADHD.
Kunconywe I-Pramiracetam powder (68497-62-1) Isilinganiso
Izinga elilinganiselwe lihluka kusuka kumuntu kuya komuntu, isincomo se-pramiracetam ngu-600mg-1200mg, sizosikisela ukwahlukanisa inani lokudla kwansuku zonke ngamanani amabili noma amathathu, ngoba i-pramiracetam ine-5 ku-6 yokuphila kwehafu yesikhathi. Uma ngokulinganayo uhlukanisa umthamo phakathi nesikhathi sosuku, ngokuqhubekayo izinga le-nootropic lizoba sesistimu yakho, futhi kube ngcono umphumela jikelele.
Izifundo zabantu ezikhona zasebenzisa ukudla kwansuku zonke kwe-1200 mg we-pramiracetam, itholakale ukuthi iphumelela futhi ibekezeleleke kahle futhi ingaba iphuzu elihle lokubhekisela ekunqumeni izidingo zomuntu siqu. Kodwa kuhlale kuwukuhlakanipha ukuqala ngomthamo ophansi kakhulu ongasebenza futhi ulungise amanani njengoba kudingeka.
Izinzuzo of I-Pramiracetam powder (68497-62-1)
Ukuqapha okukhudlwana nokwandiswa kwamandla okufunda
I-Pterostilbene powder emifushane (537-42-8)
I-Raw Alpha GPC (i-Choline Alfoscerate) powder (28319-77-9)